वर्षको अन्त्यमा ठूलो खतरा! शक्तिशाली क्षुद्रग्रह पृथ्वीतर्फ आउँदैछ – List Khabar
Home / समाचार / वर्षको अन्त्यमा ठूलो खतरा! शक्तिशाली क्षुद्रग्रह पृथ्वीतर्फ आउँदैछ
admin December 7, 2021 समाचार Leaveacomment 74 Views
सन् २०२८ मा एक किलोमिटर लामो ए’स्टे’रो’इड १५३८१४ (२००१ डब्लुएन५) पृथ्वीको छेउबाट भएर जानेछ तर त्यसबाट कुनै खतरा भने छैन । यसले करिब २.४९ लाख किलोमिटरको दुरी छो’ड्ने’छ। तर के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ यदि कुतुबमिनारभन्दा साढे दुई गुणा ठूलो ए’स्टे’रो’इ’ड २०१८ एएच पृथ्वीसँग ठोक्कियो भने के हुन्छ ?
Previous हिजोको आजै उल्टियो वर्माकी नेतृ सुकीकाे सजाय
Next जाडोमा नुहाउन अल्छी लाग्छ ? ननुहाउँदा हुन्छन् यत्ति धेरै फाईदैफाइदा